Archive du 20170109
Madagasikara Ahiana ho lasan�ny Sinoa
Mivahiny eto Madagasikara nanomboka ny sabotsy 7 janoary 2017 lasa teo ny minisitry ny raharaham-bahiny Sinoa Wang Yi.
Rajaonah Andrianjaka �Tsy azo antenaina intsony ny fitondrana HVM�
Raha ny fanazavana nomen�ny filohan�ny antoko politika Otrikafo, Rajaonah Andrianjaka,
Fanovana governemanta Roland Ratsiraka no voalohany ?
Misoko miadana ny kajikajy isan-karazany amin�ny fifidianana amin�ny taona 2018. Mivoaka tsikelikely ny resaka amin�ny ho firotsahan�i Roland Ratsiraka,
Razanamahasoa Christine Kabary volan-kakafotra ny an�ny filoha
Tsy mbola mitsahatra mihitsy hatreto ny amin�ny fanehoan-kevitra samihafa taorian�ny kabary nataon�ny filohan�ny Repoblika Hery Rajaonarimampianina farany teo teny Iavoloha tamin�ny zoma 6 janoary 2017 lasa teo.
Manao ahoana ry Jean a ! Ahoana indray izany sinemanareo mianakavy nikoropaka izany fa hoe maro ny handao ny seza amam-boninahitra atsy ho atsy ity e ?
BUCAS Antanimena Hampirisika amin�ny asa famokarana
Zina ny taona 2016 lasa teo ho an�ny birao mpandrindra ny asa sosialy eto Antananarivo na ny BUCAS satria dia tratra ny tanjona, hoy ireo tompon�andraikitra ary mihoatra izay novinavinaina aza.
Fampianarana Hiverina an-tsekoly indray ny mpianatra
Vita hatreo ny fialantsasatry ny Noely. Hisantatra ny telo volana faharoa indray ny ankamaroan�ny mpianatra manomboka anio, indrindra ny amin�ny sekolim-panjakana. Hiditra amin�ny tena votoatin�ny fianarana amin�izay ny mpianatra manomboka eto.
Antananarivo Renivohitra Voafehy ny fahadiovan�ny tan�na
Niova tokoa Antananarivo. Manana mpitantana tena tompon�andraikitra. Isan-taona toy izao dia miakatra ny feo, ary saika lohatenin-gazety isan�andro ny fako mivangongo etsy sy eroa ary koa ny fofona aterany
Minisiteran�ny mponina Tokantrano ana hetsiny misitraka �Vatsin�ankohonana�
Taorian�ny fahataperan�ny taom-piasana 2016, dia misy ny tomban�ny asa vita ho an�ny minisiteran�ny mponina, izay tarihin�ny minisitra Onitiana Really.
Retirety eo amin�ny faha-65 taona Miteraka adihevitra be
Mikorontana ny sain�ireo mpiasam-panjakana am-perinasa taorian�ny fanambaran�ny minisitry ny Fitantanana sy Tetibola Rakotoarimanana Gervais ny alakamisy 29 desambra 2016 fa mihemotra ho 65 taona ny fotoana fisotroan-dronono ho an�ny fonksionera.
Tarika Spesialista Hamoaka raki-kira � Best of � tena raitra
Tsy handalo fotsiny ity taona vaovao 2017 ity ho an�ny tarika Spesialista. Fomba fiasa sy fijery vaovao ihany koa mantsy no hoentiny hanomezana fahafaham-po ireo mpankafy azy raha araka ny fanazavan-dRandrianasolo Hugues lehiben�ny tarika.
Fampiasana telef�nina any am-piangonana �Aoka izay !�, hoy ny filohan�ny Fjkm
Nanao antso avo ho an�ny mpino Fjkm rehetra manerana ny nosy ny filoha am-perinasan�ny Fjkm, ny mpitandrina Irako Ammi Andriamahazosoa ny sabotsy lasa teo teny Ilafy.
Tsy tetezamitatra fa�
Hiitatra daholo ! Izay no fikasan�ny avy ao anivon�ny fitondram-panjakana mikasika ireo raharaha rehetra heverina fa mitana ny hoavin�ity firenena ity sy ny fitohizan�ain�ireo mpiara-belona heverina fa nahitan�ireo tanora ankehitriny masoandro.